ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံပိုက်များ ထုတ်လုပ်သူများ - China Explosion-proof Pipes Suppliers & Factory
BDM စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ ကေဘယ်ကြိုးကို အလုံပိတ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ
5. ရေနံနှင့် ဓာတုဗေဒကုမ္ပဏီများ၏ အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများတွင် ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံနိုင်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများတွင် အသုံးပြုရန် ကေဘယ်ကြိုးများ အသုံးပြုရန် မိတ်ဆက်ထားသည်။
MBG စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ အလုံပိတ်ချိတ်ဆက်ကိရိယာ
BHC စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ ဝိုင်ယာကြိုးသေတ္တာ
1. ရေနံထုတ်ယူခြင်း၊ ရေနံသန့်စင်ခြင်း၊ ဓာတုဗေဒ၊ ကမ်းလွန်ရေနံပလပ်ဖောင်းများ၊ ရေနံတင်သင်္ဘောများနှင့် အခြားသော မီးလောင်လွယ်ပြီး ပေါက်ကွဲနိုင်သော ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်၊ စစ်ဘက်၊ ဆိပ်ကမ်းများ၊ အစားအစာသိုလှောင်ခြင်း၊ သတ္တုပြုပြင်ခြင်းနှင့် အခြားသော မီးလောင်လွယ်သော ဖုန်မှုန့်နေရာများတွင်လည်း အသုံးပြုသည်။
AH စီးရီး ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော လမ်းဆုံသေတ္တာ
BGJ-b စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ (အရွယ်အစား ပြောင်းလဲခြင်း)
1. အန္တရာယ်ရှိသော-ဇုန် 1&2;
2. ပေါက်ကွဲသောလေထု- အတန်း Ⅱ;
4. ရေနံ၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အာကာသယာဉ်၊ စစ်လုပ်ငန်းစသည်ဖြင့် နယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။
5. ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော အမှတ်အသား- ExdIIGb
6. ကြိုးအမျိုးအစား- G၊ M၊ NPT
BGJ စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ ချိတ်ဆက်ကိရိယာ
1. ဇုန် 1 နှင့် ဇုန်2အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများ၊
2. Class II ပေါက်ကွဲစေသောလေထု၊
3. ရေနံ၊ ဓာတု၊ အာကာသ၊ စစ်ရေးနှင့် အခြားနေရာများတွင် အသုံးပြုသည်။
BHJ စီးရီး ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော တက်ကြွသောချိတ်ဆက်ကိရိယာ
2. ပေါက်ကွဲစေသောလေထု- အတန်း Ⅱ ;
3. အန္တရာယ်ရှိသော: ဇုန် 20၊ 21 နှင့် 22;
6. ရေနံ၊ ဓာတုစက်မှုလုပ်ငန်း၊ အာကာသယာဉ်၊ စစ်ပွဲနှင့် အခြားနယ်ပယ်များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။
BTL စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ ဓာတ်ငွေ့ပိုက်လိုင်း
3. IIB၊ IIC ပေါက်ကွဲစေတတ်သော ဓာတ်ငွေ့ပတ်ဝန်းကျင်တွင် အသုံးပြုနိုင်သည်၊
5. ပေါက်ကွဲဒဏ်ခံနိုင်သော လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများအဖြစ် ရေနံနှင့် ဓာတုဗေဒလုပ်ငန်းများတွင် အန္တရာယ်ရှိသောနေရာများတွင် အသုံးပြုသည်။ ပြင်ဆင်ထားသောကေဘယ်ကို တိုက်ရိုက်မိတ်ဆက်သည်။
BDM စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ ကေဘယ်လ် ချိတ်ပိတ်ချိတ်ပိတ် ချိတ်ဆက်ကိရိယာ
1. အန္တရာယ်ရှိသော-အပိုင်း 1&2;
2. ပေါက်ကွဲစေသောလေထုများ- classII ;
3. Indoor သို့မဟုတ် Outdoor ။
LCNG စီးရီး ပေါက်ကွဲမှုဒဏ်ခံ လိုက်လျောညီထွေရှိသော ချိတ်ဆက်ပိုက်